मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सरकारलाई सकस ! – उज्यालो खबर
मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सरकारलाई सकस !
बुधबार, भाद्र १६, २०७८
काठमाण्डौ – मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच एकपछि अर्को गाँठो देखिएको छ । यसअघि माधवकुमार नेपालको नयाँ दलले मान्यता पाएपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी थियो । तर माधव नेपालको दलले मान्यता पाएको एक हप्ता भैसक्दा समेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुबीच दिनहुँजसो बैठक भैरहे पनि मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
नारायणी नदीमा वेवारिसे शव भेटियो
गैँडाकोट कांग्रेसको अवको सभापति म : खगराज सापकोटा
अखिल अध्यक्षमा सुनिता बराल
एमसिसीका कारण गठबन्धन टुट्दैन-प्रचण्ड